Kungakanani ehlanzekile emoyeni okuzungezile?
You ze cabango ngalokho emoyeni uphefumula? Uzizwa ukukhathala emsebenzini, ukungafuni ukwenza lutho ekhaya, abantu abaningi abasinaki futhi ubuthakathaka? Khumbula labo emizweni ongenakulibaleka ukuthi kuphakama emva uhambo kuleli zwe, ngemva lonke kolwandle noma hambo ehlathini. A unentshiseko amandla, ubungqabavu, ajabule futhi ikusize - lena kuphela kancane ukuthi uhlala emva amaphaphu akho bazokwazi ukujabulela ngokugcwele emoyeni opholile.
Yini elindele ngawe edolobheni? Smog, uthuli nokungcola komoya. Kungenzeka yini ukuba ukhulume nganobe ngusiphi ezempilo, uma ungenawo ngisho ukuthi kungenzeka ukuba uphefumule ngokugcwele? Akekho ku unakekele impilo yakho ngeke! Konke nje kusezandleni zakho! Ngokwanele ukuba sikwazi ukukhuthazelela futhi clog amaphaphu akho ngentuthu! Sekuyisikhathi ukuphefumula ngokujulile, sekuyisikhathi ukuqala ukuphila ngale impilo egcwele, begcwala injabulo ajabule, sekuyisikhathi ukushintsha into. Ingabe ufuna ukuzizwa endlini yakhe wangempela wasentabeni, iphunga heady bemvelo? Ungenza lokhu kalula kakhulu ngokusebenzisa emoyeni wokuhlanza.
Acashile ungavula yini ukuphefumula ngendlela umoya ephephile ngempela futhi ezinhle. Awudingi yimuphi izilungiselelo ithuluzi, ukudala izimo ezithile nabanye. Vele uvule idivayisi futhi ujabulele yokuthi sathatha umuzi izimboni zayo, umkhathi anobuthi.
Ucabanga uthole umoya ohlanzekile endlini yakho siqu akuyona kungenzeka? Cabanga purifier emoyeni ayinalo?
Wena ungacabanga ukuthi emoyeni - uyinto imperceptible ukuthi nje yikho konke. Ingabe Usakhumbula esikoleni Yiqiniso ukuthi emoyeni asemkhathini iqukethe 20% oksijini, mayelana 78% i-nitrogen ne nengcosana amagesi inert. Lokhu kuyiqiniso ngoba okumsulwa emoyeni yemvelo: entabeni, ihlathi. Eduze iphesenti impophoma Ukwakheka kuyoba ukuhluka ngoba kukhona semali-mpilo negative ion nethonya ezuzisayo emzimbeni womuntu. Konke idyll - ukukhohlwa ngakho ngaphambili futhi for bonke!
In efulethini ezisemadolobheni, ngaphandle emisebenzini kuyo yonke indawo enobuthi nomoya izinto eziyingozi emakamu ukungcola kudlulwe. Komunye unyaka emkhathini ngu-800 000 amathani izinto eziyingozi. Futhi lena kuphela idatha esemthethweni, futhi kanjani izinto eziningi ezinobuthi empeleni ikhishwe umoya - ayaziwa kunoma ubani.
Usafuna amaphaphu akho agcwele ezinobuthi, noma ufuna ukuzizwa kwehlobo zemvelo endlini yakhe, usebenzisa umoya ionizers?
Ezikhangayo esemqoka Bosnia and Herzegovina. Neum, eSarajevo, Mostar
Trams Modern eMoscow Petersburg
Edolobheni Iningi suburban: incazelo emfushane
Surgut labantu, umlando kanye nencazelo edolobheni
Spring lomshado: amabika-March. Ingabe kuzoseshwa lomshado ngoMashi yimpumelelo?
Kuyini ibhizinisi futhi indlela yokwakha ke?
I-plaster ehlobisa. Ukubuyekeza kwe-plaster yokuhlobisa
Kunokuba ucabange iphunga lekati
Amaqiniso ethakazelisayo isicabucabu. Class arachnids: 10 amaqiniso athakazelisayo
Ilambu polymerization yamazinyo: kungani idingeka futhi kanjani ukukhetha ke?
Kungani sidinga umndeni? Ukuphila komndeni. Umlando womndeni
Isobho senkukhu ekhaya: zokupheka kanye nezici zokupheka
Umbono wezinto ezibonakalayo zombuso nomthetho